Baolina matin’i Mohamed Musa n°12 teo amin’ny minitra faha-2 sy matin’i Abdallatif Saeed n°4 teo amin’ny 61 minitra ary matin’i Yasir Mozamil n°9 teo amin’ny minitra faha-85 no niantoka ny fandresen-dry zareo Sodaney. Baolina matin’Andriamanitsinoro Carolus teo amin’ny minitra faha-76 kosa no nahazoan’ny Barea ny isa tokana tafidiny tamin’ity lalao ity. Raha atao bango tokana ny fandehan’ny lalao dia nanindry sy nibodo ny tanin’ny Sodaney hatramin’ny farany ny Barea nefa dia tonga tamin’ilay tenin’ny vazaha manao hoe nanao « domination stérile » noho ny naha tao amin’ny androny ny mpiandry haraton’i Soudan dia Yonis Altayeb fa nahatohana baolina nodakan’ny mpilalao Malagasy efa azo ambara fa tokony hiditra ho azy tsy latsaky ny 5 tany ho any dia ny 2 nodakan’i Njiva, 2 nodakan’i Bolida, 1 avy nodakan’i Jeremy Morel sy Faneva Ima ary Voavy Paulin. Ny baolina tamin’ny loha saika nampidirin’i Gros William kosa dia nidona tamin’ny tsatoby nambenan’i Yonis. Mbola mijanona laharana faha-2 hatrany ny Barea ankehitriny amin’ity fifaninanana ity manana isa 10 raha mbola i Sénégal kosa no mitana ny laharana voalohany manana isa 13 raha vao avy nandresy an’i Guinée Equatoriale 1-0 tany an-taniny tamin’ny sabotsy 17 novambra teo. Amin’ny 22 martsa 2019 ny lalao farany hihaonan’ny Barea amin’i Sénégal amin’ity fifaninanana ity.
Marihana fa anisan’ireo nanatrika ity lalao teny Vontovorona ity omaly alahady Atoa Marc Ravalomanana kandida ho filoham-pirenena Malagasy.